सम्बृद्धि कुर्दै ईमान्दार कार्यकता र देशभक्त नेपालीहरु::SamajikPatra
सम्बृद्धि कुर्दै ईमान्दार कार्यकता र देशभक्त नेपालीहरु
ज्ञानेन्द्र प्रकाश गजुरेल
काठमाडौंमा रहन थालेका मन्त्री र नेताहरूकहाँ सोझा, इमानदार, लप्पनछप्पन नजानेका, आफ्नै पाखुरा बजारेर, दस नङ्ग्रा खियाएर गुजारा चलाउने सामान्य नागरिक गएनन् । गए पनि एकाध जना साह्रै नै संकट परेर मात्र गए होलान् । किनभने उनीहरूलाई आफ्नै व्यवहार चलाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । मन्त्री र नेताहरू कहाँ कस्ता कस्ता मान्छेको भीड लाग्ने गर्‍यो भने राजधानीमा रहेका चलाख, चाटुकार, दुई नम्बर धन्दा गर्ने, घुस्याहा, ठग आदि । मन्त्री र नेताका अघिपछि, निजी र सरकारी निवास र कार्यालयमा साँझ, बिहान र दिउँसो यस्तै मानिसको भीड लाग्ने गर्‍यो । मन्त्री र नेताका सहयोगी पनि यस्तै यस्तै मानिसको भीडबाट घेरिएर रहने गरे।
यही भएर देशमा लोकतन्त्र आएको २६ वर्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १० वर्षसम्म पनि जनताको असन्तुष्टि घटेन, झन् बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को घटेन, न उग्र नारा दिने जत्थाको धम्की घट्यो । महाभूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विदेशीले दिन कबुल गरेको रकमसमेत पीडितमा वितरण हुन सकेन र पीडितहरू हिउँदवर्षा पाल र छाप्रामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ती पीडितको अभिभावक बन्न सकेन । अभिभावक त देशकै पनि बन्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताप्रति पटक्कै संवेदनशील भएन । मन्त्री र नेताका आश्वासन जनताले कहिलेसम्म सुनेर बस्ने ? जब कि गर्ने कुराको कुनै झिनो संकेतसम्म कतैतिरबाट आइरहेको छैन ।
देश बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । त्यसैले देश बिग्रेको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ । अरू पनि सुकिलामुकिला भएर हिंडेका छन्, त्यसैले मैले मात्र किन चिन्ता लिने ? ती त्यस्ता कसरी भएका छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ । तब सबैले गर्ने गरेको कुरा मैले मात्र किन नगर्ने ? यसरी देश सञ्चालन र विकास सबैको जिम्मेवारीको भएको कुरा व्यवहारमा कसैको पनि जिम्मेवारी नभएको कुराजस्तै भएको छ । बनाउनमा होइन, भत्काउनमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, सरकारी अकर्मण्य, ढिलासुस्ती आदि विकृतिविरुद्धको आवाज मधुरो बन्दै गइरहेको आभास हुँदै छ । त्यस्तो आवाज उठाउनेहरू प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको प्रतीत हुँदै छ । गलत काम गर्नेको प्रभाव सर्वत्र छाएको महसुस हुँदै
( लेखक नेपाली कांग्रेस बिध्यार्थी युवा नेता हुन् )